Random words | A Piece of Nyein
I never thought that I’m gonna miss you, The friend I cherish and treasure like you. I really never thought that I’m gonna miss you, But here I am now missing you. (written by Chris M..)
ခြေရာပျောက်သွားတဲ့ အိပ်မက်အကြွေ ။
ဇန်နဝါရီ ၇ ၊ ၂၀၁၂
January 7, 2012 by Nyein Nyein Pyae	အလွမ်း, Random words	Leaveacomment
Come on ,wind !
Blow through me sharply and share me suffering
Take me and throw away from the bleak labelling
Break all risks and clear the cognition
Tear me into tiny pieces by your provocation
Cut off my head and make me ending
It could be better than misunderstanding .
Come on,rain !
Drop on me heavily and give me pains
Shoot me and bury in the pouring drain
Flow in my eyes and send to the ocean of blame
Hit me likeahammer over and over again
Stop my breath and let me pass away to plain
It could be better than shame .
Jan 2,2012 (Mon)
On the bus ,way to home
It’s windy and rainy evening in Yangon .
January 7, 2012 by Nyein Nyein Pyae	Own Tune, Random words	Leaveacomment
သေးငယ်သောအတွေးကလေးများသည် ကျွန်မအခန်းပြတင်းပေါက်၏ ဟိုမှာဘက်မှနေ၍ တံခါးခေါက်သံပြုကာ ရစ်သီရစ်သီနေကြကုန်၏ ။လွတ်လပ်စွာမွေးဖွားရှင်သန်လေ့ရှိသော သူတို့အား နေခြည်နွေးနွေး မနက်ခင်းတွင် နေရာချပြီး ကိုယ်စိတ်နှလုံး သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ခြင်းဖြင့် နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်သည်။ ကမ္ဘာ့လောက၏ မီးအိမ်ရှင်သည် အရှေ့ဘက်တောင်တန်းများပေါ်မှ ခေါင်းပြူထွက်ကာ ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေလေပြီ ။
နံနက်ခင်း၏ ကျေးငှက်များက အဝါရောင်ဂျုံခင်းများရှိရာဒေသသို့ အလည်လိုက်ရန် တောင်းဆိုလာသည် ။ကောက်ရိုးဦးထုတ်ဆောင်းထားသည့် ပိန်ပိန်ဖျော့ဖျော့ ကလေးမလေးက အဝါရောင် တောပန်းလေးတစ်ပွင့်ကို နားရွက်နောက်မှာ ကပိုကရို ပန်ဆင်ရင်း တေးဆိုနေ၏ ။ မျက်လုံးကြည်ကြည်လေးတွေနှင့် ထိုကလေးမလေးက သူ့လက်ထဲဆုပ်၍ ကိုင်ထားသော တောပန်းရောင်စုံလေးများကို မြှောက်ပြရင်း အော်ပြောနေသည်။
“သမီး မေမေအတွက် ပန်းကလေးတွေ ဖဲကြိုးစည်းပြီး လက်ဆောင်ပေးမလို့ လေ ၊ မေမေသာ သမီးရဲ့ လက်ဆောင်ကိုမြင်ရင် သိပ်ပျော်မှာပဲနော် ”
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ငွေ့ကြောင့် ပြီးပြည့်စုံနေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မသည် ထိုကလေးမလေး၏ စကားအဆုံးတွင် မှင်သက်သွားမိ၏ ။ ခပ်သွက်သွက်ထွက်လာသော မြက်ဖိနပ်တစ်စုံ၏ ခြေသံသည်လည်း ပြတင်းမှန်အနီးသို့ အရောက်တွင် နွေးထွေးလုံခြုံသွားသယောင်ပဲ့တင်ထပ်လာပါတော့သည် ။
November 4, 2011 by Nyein Nyein Pyae	Random words	Leaveacomment
ကျွန်မ သူငယ်ချင်း ငွေကြယ်ပွင့်သို့…..
ကျွန်မ သူငယ်ချင်း ငွေကြယ်ပွင့်သို့…..
“တိုက်ဆိုင်လို့ သတိရတာမဟုတ်ပါဘူး ၊သတိရလို့ တိုက်ဆိုင်တာပါ”
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက သူပိုင်ဒဿန တစ်ခွန်းကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အတန်ကြာက ပြောခဲ့ဖူးတာ မှတ်မိသည်။Deadline နေ့မို့ ခုနှစ်နာရီကျော်မှ ရုံးဆင်းဖြစ်သည့်ညက ဘက်စ်ကားပြတင်းမှန်မှတစ်ဆင့် ကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်ရင်း အိမ်ပြန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မှိတ်တုတ် ၊ မှိတ်တုတ် ကြယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ရင်း မတွေ့ရတာ ကြာပြီဖြစ်သည့် သူငယ်ချင်းတွေကို လွမ်းသည်။အတောမသတ်နိုင်သည့် မဟူရာကောင်းကင်တွင် အခြားကြယ်တွေထက် ပိုထင်းလင်းကာ တစ်စင်းထီးတည်း တောက်ပနေသော ကြယ်ကြီးကိုလည်း တွေ့ရသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်မအပေါ် အလွန်ကောင်းခဲ့သော ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို သတိရသည်။ကျွန်မ ဘ၀ သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် သူငယ်ချင်း အမြောက်အများ ရှိခဲ့သလို ၊ အချစ်ဆုံး အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဆယ်တန်းနှစ်မှ စတင်ခင်မင်ခဲ့ပါသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်မအပေါ် အံ့သြရလောက်အောင် ချစ်ခင် ၊ အနွံအတာ ခံနိုင်သူဖြစ်ခဲ့တာကတော့ ရှေးဘ၀ ရေစက်ပင်ဖြစ်မည် ထင်ပါသည်။ အခုလိုပင် ကြယ်တွေစုံသော ညတစ်ညက ဘော်ဒါဆောင်ရှေ့ ဝရံတာတွင် စာကျက်နေရင်း သူပြောခဲ့ဖူးသည့် စကားတစ်ခွန်းကိုလည်း မှတ်မိနေပါသေးသည်။
“Memoi ၊ ဟိုးမှာ သူများတွေထက် ပိုလင်းနေတဲ့ကြယ်ကြီးကိုတွေ့လား ၊ သူများကြယ်တွေလို မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်လည်းဖြစ်မနေဘူး ၊ Stable ပဲ ၊ အဲဒါ သောကြာကြယ် Venus ပေါ့ ၊ ငါ အဲဒီ့ကြယ်ကြီးကို အရမ်းသဘောကျတယ် ၊ နင့် ဘ၀မှာ ကြယ်တွေအများကြီးရှိမှာပဲလေ ၊ ဒါပေမယ့် ငါက နင့်အတွက် သောကြာကြယ်လို သူငယ်ချင်းပဲ ဖြစ်ချင်တယ်”
စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တတ်သော သူငယ်ချင်းကို ထိုအချိန်က သဘောတကျ ရယ်မောခဲ့ဖူးသည်။ ကြယ်တွေလို့ လူတွေပြောနေသော အရာတွေဟာ တကယ်တော့ ကမ္ဘာမြေနဲ့ အလွန်ကွာဝေးသော စကြာဝဋ္ဌာထဲက ဂြိုဟ်ကြီးတွေသာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မကပြောတော့ သူက လက်မခံခဲ့ပေ။ကြယ်လို့ သဘောထားတာကသာ ပိုသဘောကျဖို့ကောင်းကြောင်း ဆင်ခြေပေးတတ်သည် ။
ကြယ်တွေကိုချစ်တတ်သော ၊ ကြယ်တွေအကြောင်း ပုံပြင်ပြောတတ်သော သူငယ်ချင်းကို ကြယ်တွေကြွေတတ်သည့်အကြောင်း ကျွန်မ သတိမပေးဖြစ်ခဲ့ပါ ။
ကျွန်မတို့သည် လောကဇာတ်ခုံ ကောင်းကင်ကြီး၏ ရင်ခွင်တွင် ငွေကြယ်ပွင့်လေးများအဖြစ် တွဲလွဲခိုနိုင်ခွင့်ရရန် ကြိုးစားနေကြရပါသည်။တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကြွေကျသွားသော ကြယ်ကြွေတစ်ချို့၏ ငိုရှိုက်သံကိုလည်း စိတ်မကောင်းစရာ ကြားမိဖူးပါ၏။သောကြာကြယ် ဖြစ်ချင်သော ကျွန်မ၏ သူငယ်ချင်းကို ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်မှာလည်း သက္ကရာဇ် သုံးခုစာပင် ကျော်လွန်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်မယုံသည်။သူသည် တိမ်ဖုန်းနေသော သောကြာကြယ် တစ်စင်းသာ ဖြစ်သည်။တစ်နေ့နေ့ လောကကြီး၏ တစ်နေရာရာတွင် သူ့ကို ပြန်လည်တွေ့ရှိခွင့်
“ကိုရေ—ပျောက်နေတဲ့ Venus ကို ဘယ်လိုရှာရမလဲဟင်”
ငယ်သူငယ်ချင်းကို သတိရခြင်း ပန်းပွင့်တွေနေ့တိုင်း ကြွေမိသည့်ကာလ ကျွန်မချစ်သော ချစ်သူကို ရင်ဖွင့်ပြောပြဖြစ်သည်။ကျွန်မဘ၀မှာ လင်းလက်ခဲ့ဖူးသော သူငယ်ချင်းကောင်းတွေအကြောင်း ကျွန်မချစ်သူလည်း နားရည်ဝနေလောက်ပြီထင်။
“Memoi သတိမထားမိဘူးနဲ့ တူတယ်ကွ ၊ Venus က ညနေမှောင်ရီပျိုးစလောက်ကထဲက သူတစ်စင်းတည်း စပေါ်လာတတ်တာ ၊ ညနက်လို့ ကြယ်တွေစုံပြီး အလင်းရောင်များလာတဲ့အချိန်ဆို သူ့ကို ရုတ်တရက် မတွေ့ရတော့ဘူး”
“ဟုတ်တယ်နော် ၊ ကို ပြောတာဟုတ်တယ် ၊ ဒါပေမယ့် Memoi သိချင်တာက သူ့ကို ပြန်ရှာလို့ ရပါ့မလား ၊ ဘယ်လိုပြန်ရှာရမလဲ ဆိုတာလေ”
“ဒါကလွယ်ပါတယ် ၊ နောက်နေ့ ညနေရောက်ရင် သူပြန်ရောက်လာရမှာပေါ့ ၊ မဟုတ်ဘူးလား၊ Memoi ဘ၀မှာ ညနေခင်းတွေက ခဏခဏ လာနေဦးမှာပဲလေ”
“အိုးးးး—မှန်လိုက်တာ ကြည့်စမ်း ။ ဒါကို Memoi မေ့နေခဲ့တယ် ၊ အဲလိုမျိုး မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူးသိလား”
“ဟုတ်ပါပြီ ၊ အဲဒါထက်အရေးကြီးတာက Venus နဲ့ တခြားကြယ်တွေကိုပဲ သတိရမနေနဲ့ ၊
Memoire က ကိုယ့်ရဲ့ Polestar ဆိုတာလည်း မမေ့နဲ့ ဦးနော် ”
“ဟားဟား ၊ ဟုတ်ပါပြီ ကိုရယ်…”
ကျွန်မဘ၀တွင် တွေ့ကြုံခွင့် ရသောသူများကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရိုးသားတည်ကြည်သော ၊ နားလည်မှု အပြည့်အ၀ရှိသော ကျွန်မ၏ ချစ်သူ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်သည်။ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်သည်။ သူတို့ကို လွမ်းတိုင်း ငယ်ဘ၀၏ ဖြူစင်ပုံ ၊ ငယ်ဘ၀၏ အပြစ်ကင်းပုံတွေကို အောက်မေ့ရသည်။
“မိတ်ဆွေဟောင်းဆိုတာ အကောင်းဆုံးကြေးမုံပြင်ပဲ” လို့ ဂျော့ ဟားဘက် ကောက်ချက်ချခဲ့ဖူးတာကို ကျွန်မ မှတ်သားဖူးပါ၏ ။
ကျွန်မ စီးနင်းလာသော အဓိပတိ ဘတ်စ်ကားကြီးက ဆင်းရမည့် မှတ်တိုင် ရောက်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သတိထားမိလိုက်သည်။ကားပေါ်မှ ဆင်းပြီးနောက်မှာလည်း တဖျက်ဖျက် လင်းလက်နေကြသည့် ကြယ်ရောင်စုံကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်ဖြစ်၏။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကရော ကြယ်တစ်စင်းအဖြစ် ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်နဲ့ တောက်ပဖို့ ဘာဖြစ်လို့များ မဖြစ်နိုင်ရမှာတဲ့လဲ ။ကျွန်မဟာ ကျွန်မကို လက်ကမ်းသောသူတွေအတွက်
အလင်းရောင် တက်စွမ်းသမျှ မျှဝေသည့် ကြယ်တစ်စင်းအဖြစ် တောက်ပနေနိုင်ပြီ ။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို လက်တွဲခဲ့သည့် သူငယ်ချင်း ကြယ်ပွင့်ကလေးတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ဖူးပြီ။စစ်မှန်သော သူငယ်ချင်းအချစ်ကို ရရှိခံစားနိုင်ခြင်းကလည်း ၀ယ်ယူမရနိုင်သော ဆုလာဒ်တစ်ပါးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မနားလည်ခဲ့ပြီ။တပြိုင်နက်မှာပဲ အဝေးရောက် သူငယ်ချင်း တွေကို လွမ်းတတ်ပြီ ။ သူတို့တွေကို သိစေချင်သည့် စကားတစ်ခွန်းကို ပြောပြချင်ပါသေးသည်။
“ကျွန်မသူငယ်ချင်း ကြယ်ပွင့်လေးတွေ ၊ ဘယ်မှာဘာပဲဖြစ်နေနေ ၊ ကြွေကြွေ မကြွေကြွေ ၊ မြေပြင်ထက်မှာပဲ ကျိုးပဲ့နေပါစေ ၊ သူတို့ဟာ ကျွန်မရဲ့ ထာဝရ ငွေကြယ်ပွင့် တွေပါပဲ ”
ဆိုတာ သူတို့ကို နားလည်စေချင်မိပါ၏။
ကြယ်တွေစုံသော အဲဒီ့ညတစ်ညသည် ကျွန်မ၏ အိပ်စက်ခြင်းများကို လုယူ ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတော့သည်။
October 5, 2010 by Nyein Nyein Pyae	အလွမ်း, Random words	Leaveacomment
July 7, 2010 by Nyein Nyein Pyae	စိတ်ကူးထဲက စာစု, Random words	2 Comments